Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro ayaa si rasmi ah ula shaqeeya Snapdragon 888 iyo Android 11 | Androidsis
Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro ayaa si rasmi ah ula shaqeeya Snapdragon 888 iyo Android 11
Meizu ayaa ka dhigtay labo ka mid ah calankeeda rasmiga rasmi ahaan suuqa Shiinaha magacyada Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro. Farqiga u dhexeeya labada ayaa ku yaal shaashadaha, kaamirooyinka gadaal, batteriga iyo natiijada ugu dambeysa, qiimaha labadaba.
Way yimaadaan daadasho badan kadibBilooyin badan ka dib shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa laba terminaal oo leh kii ugu dambeeyay ee Qualcomm, waxaa sidoo kale taageera Sony marka ay timaado adeegsiga muraayadaha indhaha. Iyagu waa laba qalab oo imanaya si ay u istaagaan tan ugu dambeysay ee ay shaacisay Xiaomi, Samsung iyo shirkado kale.
1 Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro, oo ah laba heer sare ah oo qiime lagu jaangooyay ah
2 Batariyada degdegga ku shaqeeya
3.2 Macluumaadka farsamada
Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro, oo ah laba heer sare ah oo qiime lagu jaangooyay ah
El Meizu 18 wuxuu kudhisanyahay shaashad Super AMOLED 6,2-inji ah oo leh xal buuxa HD +, halka Meizu 18 Pro uu ku kordhinayo 6,7 inji isla xallintaas. Heerka dib-u-cusbooneysiintu waa 120 Hz labadaba, oo leh sambal 240 Hz ah, muraayadda hore waxay ku dhammaatay afar wareeg oo labada nooc ah.
Waxay ku dhex jirtaa processor-ka Snapdragon 888 ee ka socda Qualcomm labadaba, jaantusyada garaafku waa Adreno 660, Xulashada RAM-ka waxaad fursad u leedahay inaad kala doorato 8 iyo 12 GB LPDDR5 iyo keydka 128/256 GB UFS 3.1. Waxaa jirta suurtagalnimada in la kala doorto noocyo kala duwan, kan hore waa 8/128 GB kan labaadna waa 12/256 GB.
Kaamirooyinka labada nooc waa halka ay ku kala duwan yihiin, Meizu 18 wuxuu ku sharxayaa 64 MP Sony sensor weyn, kan labaadna waa 16 megapixel xagal ballaadhan midka saddexaadna waa 8 megapixel telephoto leh 3x zoom. Meizu 18 Pro wuxuu rakibayaa afar kamarad, midka ugu weyni waa 1-megapixel Samsung GN50, kan labaad waa 32 megapixel Ultra xagal ballaadhan, midka saddexaadna 8 megapixel telephoto iyo midka afraad oo ah aaladda 'ToF 3D sensor'. Kaamirada iswada ee Meizu 18 ayaa timid meel god ah oo ku duugan shaashadda 20 MP, halka 18 Pro ay isku mid tahay 44 MP.
Batariyada degdegga ku shaqeeya
Meizu 18 wuxuu doortay batari dhan 4.000 mAh, oo ku filan in lagu hayo maalinta oo dhan hal mar oo keliya, taas oo ballanqaadaysa in laga qaado 0 illaa 100% wax ka yar nus saac. Xawaaraha degdegga ah wuxuu gaarayaa 36W oo leh USB-C, halka uu ku imaanayo kaliya fiilada oo aan lahayn furitaanka ugu yaraan bilowga.
Meizu 18 Pro wuxuu batarigiisa ku kordhinayaa 4.500 Mah Markaad yeelato shaashad ballaadhan, rarku wuu dhakhso badnaan doonaa, wuxuuna ka kacayaa 0 ilaa 100% qiyaastii 27 daqiiqo. Lacagta degdegga ah waa 40W, oo la mid ah Huawei P40 Pro, halka ay sidoo kale ku bixiso lacag la'aan wireless 10W, tani kuma dhacayso qaabka Meizu 18. Waxay la timid kaliya fiilada USB-C.
Isku xirnaanta labada taleefan waa isku mid, waxay ku yimaadeen xiriir 5G ah mahadnaqa modemka X60 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C oo loogu talagalay soo-celinta qalabka iyo NFC. Furitaanka waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo akhristaha faraha faraha shaashadda hoosteeda, Inuu barnaamij yahay marka aad ka soo saarto sanduuqa oo uu bilaabo inuu shaqeeyo.
Nidaamka qalliinka ee Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro waa isku mid, Android 11 iyada oo cusbooneysiintii ugu dambeysay, midda bisha Janaayo timid oo la cusbooneysiin karo noocyada dambe. Daboolka ayaa laga yaabaa inuu yahay Flyme 9, oo lagu dhawaaqay saacado ka hor inta uusan labada taleefan ku soo bandhigin dhacdo ka dhacday Aasiya.
MUUQAAL 6.2-inch Super AMOLED oo leh HD + xallinta buuxda (3200 x 1440 pixels) / Heerkii cusbooneysiinta: 120 Hz / Muunad qaadashada: 240 Hz
KAADHKA CARRUURTA Adreno 660
KAAMARKA DAR 682 MP f / 64 Sony IMX1.6 dareeraha ugu weyn / 16 MP f / 2.2 dareeraha baaxada weyn / 8 MP telephoto leh 3x zoom
KAAMI HOR 20 Dareeraha dareeraha
BATARY 4.000 Mah oo leh 36W lacag deg deg ah
Isku xirnaanta 5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / NFC / USB-C
Qiyaasaha iyo Miisaanka Si loo xaqiijiyo
MUUQAAL 6.7-inch Super AMOLED oo leh HD + xallinta buuxda (3200 x 1440 pixels) / Heerkii cusbooneysiinta: 120 Hz / Muunad qaadashada: 240 Hz
KAAMARKA DAR 1MP f / 50 Samsung GN1.9 shidmaalka ugu weyn / 616MP f / 32 Sony IMX2.2 dareeraha aaladda xagal-ballaadhan / 8MP telephoto leh 3x zoom / 3D ToF sensor
KAAMI HOR 44 Dareeraha dareeraha
BATARY 4.500 mAh oo leh 40W lacag degdeg ah / 10W lacag la'aan wireless
El Meizu 18 wuxuu ku imaan doonaa midab cad, buluug ah iyo guduud ah noocyada 8/128 GB qiimaha CNY 4,399 (579 euro in la beddelo), 8/256 GB ee CNY 4,699 (618 euro) iyo 12/256 GB waxay ku baxday 4.999 CNY (640 euro).
El Meizu Pro 18 waxaa lagu heli doonaa midabyo cad, buluug iyo cawl, Nooca 8/128 GB wuxuu ku kacayaa CNY 4.999 (640 euro), nooca 8/256 GB wuxuu ku kici doonaa CNY 5.499 (704 euro) iyo nooca 12/256 GB wuxuu kusii kordhayaa CNY 5.999 (768 euro).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro ayaa si rasmi ah ula shaqeeya Snapdragon 888 iyo Android 11
Ciyaaraha Epic waxay iibsadaan Mediatonic, istudiyaha abuuray Fall Guys
Sida loo sameeyo liiska qiimaha meheraddaada ee QR code adigoon lahayn degel